Home ELITES Aleksander Ceferin Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
LB na-egosi Full Story of a Football Elite onye kacha mara amara "Onye Na-ahazi Njikwa". Anyị Aleksander Ceferin Child Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye ọdịnala ya, akụkọ ndụ tupu ama ama, ebili na akụkọ a ma ama, mmekọrịta na ndụ onwe onye
Ee, onye ọ bụla maara na o si n'adịghị ọhụụ na-eme ka ọ ghọọ onye nke abụọ-nwoke kachasị ike na football. Otú ọ dị, ọ bụ nanị mmadụ ole na ole na-ele Aleksander Ceferin's Biography nke na-akpali mmasị. Ugbu a n'atụbeghị ọganihu, ka anyị malite.
Aleksander Ceferin Childhood Story Plus Na-enweghị Nkọwa akụkọ Eziokwu- Mmalite Ndụ na Ezinụlọ
A mụrụ Aleksander Ceferin na 13th Day nke October 1967 na Ljubljana na Slovenia. Ọ bụ nwa nke abụọ na nwata nke a mụrụ nne ya Ana (agụmakwụkwọ) na nna ya Peter (onye ọkàiwu a ma ama).
N'ịbụ onye na-eto eto na Ljubljana (obodo ya) na nwanne ya nwoke nke tọrọ ya bụ Rok, Aleksander bụ nwa nwoke siri ike ma dị ike nke gosipụtara àgwà nke ịkwado ọrụ, eziokwu bụ na nna ya bụ Peter mere ka a mara ya n'ụzọ dị otú a:
"Aleksander dị nanị anọ mgbe ya na otu nkịta na-eje ije. Nkịta na-achọ ịlaghachi n'ụlọ, obere Aleksander ekweghị ka ọ pụọ, nkịta ahụ dọkpụụrụ ya n'ala, ma Alegzanda jidere ya ma dọkpụrụ ya n'ụlọ "
Dika ihe omuma nke ihe omuma nke ndi ozo, nwa akwukwo Aleksander maara ot'esi mezie nsogbu ya na nwanne ya nwoke rok Rok, nke ha chetara nke oma n'igbu ha nnwere onwe site na mkpebi ndi nne na nna ha iji me ka Music na duo.
"Ndị mụrụ anyị chọrọ ka anyị mụta otú e si akpọ ngwá ọrụ. Ha họọrọ nnwere onwe ahụ, ma anyị kpọrọ ya asị na mbụ. N'ime oge omume, anyị egosighi talent ma ọ bụ mgbalị ọ bụla n'inye ọzụzụ. Nke a nọgidere na-aga n'ihu ruo ọtụtụ ọnwa ruo mgbe ndị nne na nna anyị na-ewute anyị na enweghị nkụda mmụọ nke onye nkụzi anyị. "
Otú ọ dị, Aleksander kwuru otú anyị pụrụ isi dozie nsogbu ahụ. Ọ tụrụ aro ka anyị ree nnyekọrịta ahụ ketara ụgwọ. Nke a ka anyị mere na nzuzo. Nne anyi mechara chọputa na ihe agha ahu adighi ma o nweghi nsogbu. A sị ka e kwuwe, ụlọ ahụ dịkwuo mma n'enweghị ihe nkwekọ.
Aleksander Ceferin Childhood Story Plus Na-enweghị Nkọwa akụkọ Eziokwu- Nkụzi na ịrụ ọrụ
Aleksander nwere agụmakwụkwọ ya bụ isi na ụlọ akwụkwọ primaries na Grosuplje ebe mama ya na-abụ isi n'oge ahụ. Mgbe ọ nọ n'ụlọ akwụkwọ ahụ, ọ bụ nwa akwụkwọ nke na-adịghị eji agụmakwụkwọ eme ihe dị njọ ma mee ka ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ nwee nsogbu. Ka o sina dị, nne ya (nke dị na ya n'okpuru) nwere ebe dị nro ma chefuo ndị ọjọọ ya.
Ná ngwụsị nke oge ụlọ akwụkwọ, Aleksander sooro ndị ọgbọ ya na-egwu egwuregwu, na-eje ozi dị ka onye na-elekọta obodo. Tụkwasị na nke ahụ, ọ bụ onye na-akwado ya Hajduk Split, nke bụ otu n'ime ìgwè ndị kasị mma na mbụ Yugoslavia n'oge ahụ.
Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ praịmarị, Aleksander nwere nrọ nke ịghọ onye na-azụ mmiri kama ọ bụ kama nke ahụ, debanyere ya na Gymnasiums ebe ọ nọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Nke mbụ bụ Gimnazija na Sticno tupu ya ahapụ Poljana Gymnasium na Ljubljana.
Aleksander Ceferin Childhood Story Plus Na-enweghị Nkọwa akụkọ Eziokwu- Ụzọ Iji Mara Aha
1991 bụ afọ nke Aleksander natara akwụkwọ iwu iwu na Mahadum nke Ljubljana. Mgbe ọ nọ na ya, ọ kwadoro n'echiche nke Ombudsman Human Rights, bụ nke mba Scandinavia maara n'oge ahụ.
Nye Aleksander, ụzọ a ma ama mgbe gụsịrị akwụkwọ dị ogologo na ngwa ngwa. O bu ụzọ bata n'ụlọ ọrụ nna ya nke nna ya na-elekọta ụlọ Pita ma were mmasị na-anọchite anya klọb egwuregwu na ndị egwuregwu.
Ihe omume nke ihe gbasara iwu kwadoro na ọ na-achọ ọdịmma na ọrụ dị iche iche n'ime otu ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa nke Slovenia kacha mma, KMN Svea Lesna Litija tinyere akụkụ onye amateur, FC Ljubljana nile n'etiti 2005-2011.
Aleksander Ceferin Childhood Story Plus Na-enweghị Nkọwa akụkọ Eziokwu- Bilie Iji Mara Aha
Ndị a ma ama malitere ịkụ na 2011 mgbe a họpụtara Aleksander dị ka onyeisi ndị football na Slovenia (NZS) na 2011, ọrụ ọ na-eme nke ọma na ọ bụ onye isi oche nke abụọ na nke atọ nke UEFA Iwu Kọmitii site na 2011 na 2016.
N'ikpeazụ, o si n'ọgba aghara na-esote mgbe ọ nụsịrị ntuli aka dịka onyeisi oche nke asaa nke UEFA na 12th Extraordinary UEFA Congress na Athens na September 2016 ma ghọọ onye isi oche nke FIFA ụwa. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Aleksander Ceferin Childhood Story Plus Na-enweghị Nkọwa akụkọ Eziokwu- Ndụ mmekọrịta
Aleksander enweela ogologo oge lụrụ nwunye ya mara mma nke aha ya bụ Barbara Ceferin. Di na nwunye mbụ zutere mgbe ha gara agbamakwụkwọ ha ndị enyi ma malite ịbịaru oge. Ha na-enwetara onwe ha n'oge 1999 di na nwunye ma nọgide na-alụ di na nwunye kemgbe.
Ọ dị mma ịchọta na Barbara bụ onye na-ese foto site na ọrụ ma nwe ya foto na akwụkwọ onwe ya. Ọ ọ dịghị mgbe ọ kwụsịrị ịkwanyere di ya ùgwù bụ onye ọ na-akọwa n'ụzọ dị otú a:
"Ọ dị nnọọ n'anya, dị nro, na-aṅa ntị, na-echebe nnọọ dịka mmadụ kwesịrị ịdị. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike mgbe ụfọdụ ike, aghaghị m ikweta na o nwere mkpụrụ obi dị nwayọọ nke m hụrụ n'anya. "
Barbara na Barbara na Aleksander gọziri ya na ụmụaka atọ. ha gụnyere Nina (a mụrụ 1993), Neza (a mụrụ 2002) na Anait (a mụrụ 2005).
Aleksander Ceferin Childhood Story Plus Na-enweghị Nkọwa akụkọ Eziokwu- Ị maara?
Aleksander agafewo ọzara Sahara ugboro anọ site na ụgbọ ala na otu n'ime ọgba tum tum
E debara ya akwụkwọ iji lụọ ọgụ n'ihe a maara dịka Agha iri Otú ọ dị, esemokwu ahụ biri tupu ya ahụ ihe ọ bụla.
Na-ekwu maka ịlụ ọgụ, Aleksander nwere eriri eriri nke atọ na karate
N'ịbụ onye na-ekwu okwu n'asụsụ Slovenian, Aleksander na-asụ asụsụ Bekee na Ịtali,
Ọ hụrụ nkịta ma nwee nkịta atọ maka ụmụ ya ndị inyom.
Aleksander Ceferin Childhood Story Plus Na-enweghị Nkọwa akụkọ Eziokwu- Ezigbo Ndụ Onye
Aleksander bụ nwoke nwere mmasị na-enwe obi ike na nkwenkwe ya n'ihe ọ bụla o mere. Tụkwasị na àgwà ahụ e kwuru n'elu bụ nkà ya dị iche iche nke mmadụ, mmetụta nke ikpe ziri ezi, nnọgidesi ike, na-elekwasị anya, yana ịsọpụrụ onwe ya nye ezinụlọ ya.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ Aleksander Ceferin na nwata. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike ka anyị mee ihe ziri ezi. Ọ bụrụ na ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.